Odowaa Oo La Hadlay Goobjoog: Waxaa Lagu Qasbanaan donaaa in Meel dheer Laga raadiyo Galmudug – Goobjoog News
Xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa oo ka tirsanaa murashaxiinta qaadhacay doorashada Galmudug ee maanta ka dhacday Dhuusamareeb, laguna doortay Axmed Qoorqoor ayaa sheegay in Galmudug ay ku laabatay meel ka xun halka ay joogtay 2015-kii.
Xildhibaan Odowaa oo la hadlay Goobjoog News ayaa waxaa uu yiri “Galmudugta cusub waxa ay ku laabatay meel ka xun meeshii aan 2015 ka keenay oo aheyd sadax maamul iyo qbaail kala duwan. Hadda maanta waxaa jira sadax Madaxweyne iyo sadax baralamaan.”.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa oo sii hadlaya waxaa uu sheegay in waxa la sameeyey aaney aheyn wax waaraya isaga oo yiri “Dowladdu waxa ay Galmudug ka samaeysay ma ahan wax waaraya, waxaana lagu qasbanaan donaaa in meel dheer laga raadiyo Galmudu”.
Saacado ka hor, waxaa uu bartiisa Farcboogga soo dhigay qoraal ahaa inuu baaq u dirayo dadka reer Galmudug, kana shaqeeyaan Galmudug mid ah ““Waxaan dhammaan waxgaradka, odayaasha dhaqanka iyo saamileeyda siyaaasadeed ee ree Galmudug iyo sadaxda garab ee hadda saakay Galmudug u qaybsanthay inaan isugu nimaad sidii hal maamul loo dhisi lahaa”.
Doorashada Lagu Doortay Qooqoor waxaa qaadhacay saddex koox:
Dowladda Soomaaliya oo Heshiis La Gashay Shirkad Caalami ah Si Kheyraadkeeda U ilaaliso
Abaanduulaha ciidanka Soomaaliya oo Jalalaqsi kula kulmay qeybaha bulshada
together driver cheap viagra usa without prescription hard data sale generic viagra online pills enough champion viagra for sale mainly economics
[url=http://viacheapusa.com/#]sale generic viagra online pills[/url] deliberately agent generic viagra seriously image http://viacheapusa.com/
Cialis Et Jus De Pamplemousse [url=http://abuycialisb.com]Buy Cialis[/url] Tadalafil Overnight Delivery cialis 5 mg best price usa Amoxicilina Penamox Best Website With Free Shipping
Viagro Pills [url=http://buycialisuss.com]Buy Cialis[/url] Action Of Amoxicillin On Pancreatic Cells Buy Cialis Amoxicillin For Venereal Diseases
Levitra Filmtabletten Teilen [url=https://apcialisle.com/#]Cialis[/url] Finasteride On Sale No Prescription cialis online ordering Canadian Pharcharmy Online No Script
Dagaal Beeleed Ka Dhacay Magaalada Mandheera